अमेरिकी सिक्के: फोटो र इतिहास
जो कारण आर्थिक कारण, एक लामो समय को लागि simmering गरिएको छ अमेरिकी डलर, चासो। तर कम भनेर देश, द्वारा जारी सिक्का को कुरा। इतिहास तिनीहरूलाई लागि राज्य विशेष सम्बन्ध थियो भनेर देखाउँछ। अमेरिकी आए र सिक्का परिवर्तन बारे थप विवरण, पढ्न।
शब्द "डलर" चेक मूल को छ। त्यसपछि बोहेमिया तथाकथित थियो के मा चाँदीका सिक्काहरू। पछि तिनीहरूले taller पुन: नामाकरण गरियो। तर 1700 मा उपनिवेश अमेरिका परिसंचरण ढाँचाहरू मा Bohemian सिक्का जस्तो आकार मा जो र स्पेन, छँदा तिनीहरूले डलर वा pesos मा भनिन्थ्यो।
मुद्रा निर्माण प्रक्रिया rigidly 1792 देखि सरकार नियन्त्रित छ। त्यसपछि यसलाई आफ्नो इतिहास मा, अमेरिका को लागि तर फिलाडेल्फिया, डेन्भर, पश्चिम बिन्दु, सान फ्रान्सिस्को लागि मात्र होइन मुद्रा को minting मा लगे जो टंकशाला, शुरू भएको थियो।
1792 मा अमेरिकी राष्ट्रपति $ 1 100 सेन्ट बराबर थियो जो मा कानून हस्ताक्षर गरे। यी बैंकनोट्स अझै पनि देश मा प्रमुख छन्। (यसैले शब्द "Buck" देखा) मुद्रा (एक प्रतिशत), निकल (5 सेन्ट), सिक्का (दुई निकल) ट्यांक = एक डलर तर अनौपचारिक शब्दावली अन्य नाम प्रयोग।
विधान कार्य सुन र चाँदीको स्पष्ट fixation अनुपात संग सिक्का को एक मुक्त मुद्दा परिचय देखिन्छ। बजार अस्थिरता को कारोबार को मामला मा अमेरिकी धातु मूल्य उतार चढाव कारण वृद्धि मान जो सिक्का, जफत। निश्चित अनुपात 1:15 थियो। तर प्रत्येक जारी यसलाई परिवर्तन भयो।
संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस को संविधान को ग्रहण अनुमति दिएको छ पछि सुरक्षा बैंकनोट्स जारी गर्न बैंक। तर एउटै र अन्य उधारो संस्थाहरू गरिरहेको। फलस्वरूप, कारोबार फरक बैंकनोट्स हजारौं भन्दा बढी थियो। Fraudsters यी सिक्का, अमेरिकी डलर खुसीसाथ प्रयोग। को गृहयुद्ध अन्त गरेर, परिसंचरण मा बैंकनोट्स को तेस्रो संग बिग्रेका गरिएको छ। समस्या गुप्त सेवा लिन निर्णय गरे।
"सुन रश" 1849 मा शुरू भयो। सिक्का "$ 1" परिसंचरण मा आए। एक समय पछि3र 20 डलर को संप्रदाय मा बैंकनोट्स थिए। को कन्फडरेशन संग युद्ध वित्त गर्न, आफ्नै बैंकनोट्स जारी गर्न कांग्रेस खजाना बाध्य। यी "greenbacks" 1878 सम्म बहुमूल्य धातु प्रदान थिएनन्।
ऐन 1873 bimetallism र ल्याए सुन मानक पल्टाइदिनुभयो। चाँदी एक वस्तु भएको छ र यसको निश्चित लागत गुमाएको छ। यो प्रक्रिया बेरोजगारी गर्न नेतृत्व जो अपस्फीति, पछि थियो। अस्तित्व धेरै वर्षसम्म यो सिस्टम बहस धेरै कारण। तर यो महान् अवसाद को आगमन संग हटाइएको थियो।
टाउको वा पुच्छर
अमेरिकी सिक्का लागि पहिलो छवि, जो को फोटो प्रस्तुत छ पछि, यो अन्ना इच्छुक Binham, पहिलो बैंक को अध्यक्ष को छोरी बाट प्रतिलिपि थियो। थोमस जेफरसन डिजाइन जारी Dzhon Rayh मा लगे थियो। एक मोडेल को भूमिका मा उनको टाउको मा एक Phrygian टोपी संग केटी गरे। पछि वर्ष मा, डिजाइन धेरै पटक परिवर्तन भएको छ।
सबैभन्दा स्मरणीय उदाहरणका THEODORE रूजवेल्ट अन्तर्गत जारी भएको थियो। कारण एक convex र निराश अमेरिकी सिक्का वृद्धि आफ्नो जीवन को असामान्य आकार। 1837 1838 बैंक नोटहरू देखि अवधिमा स्वतन्त्रताको नयाँ छवि संग जारी गरेका थिए। तिनीहरूलाई minted केटी जो, एक रक बसिरहेका छ आफ्नो हातमा «स्वतन्त्रता» लेखिएको एउटा ढाल पकड थियो। तथापि, गल्ती कलाकार द्वारा गरिएको थियो। दाहिने बाँया भन्दा ठूलो देख्यो। तर अझै पनि यो सिक्का 50 वर्ष को लागि परिसंचरण मा भएको थियो। 1892 मा बैंकनोट्स को एउटा ठूलो पुनः जारी थियो कारण नमूनाहरू को एक ठूलो संख्या को संग्रह गर्न sverhstaryh।
विजेता पछि पहिलो विश्व फिर्ता मा "शान्ति डलर" देखियो। यो एउटा जैतून शाखा गंजा चीललाई चित्रण गरिएको थियो «PEACE» लेखिएको एउटा रक मा विराजमान।
"Morganist" - विशेष महत्व को मुद्राकार देखि आफ्नो नाम मिल्यो जो सिक्का "$ 1" छ। 1873 देखि यो सुन देखि minted थियो। चाँदी बारुद ऐन 1873, bimetallism repealed जो, प्रभावित मालिक। तर कहिलेकाहीं धातु सिक्का को लागत को विशाल खरिद पछि आफ्नो अनुहार मूल्य बढ्यो। फलस्वरूप, बैंक नोटहरू फेरि टंकशाला सुन (1878) गर्न थाले र3चाँदी र5सेन्ट को मूल्यवर्ग मा परिसंचरण देखि हटाउनुभएपछि।
पछि महान् अवसाद फिर्ता त्यहाँ एक सिक्का "अमेरिकी 25 सेन्ट" (एक चौथाई) थियो। अमेरिका को मुख्य प्रतीक - - द्वारा वाशिंगटन बदलिएको थियो यो स्वतन्त्रता जहाँ पहिलो थियो। यो प्रवृत्ति त धेरै पटक दोहोर्याइएको छ। नमूना 1964 प्रयोगमा अब छ। त्यसपछि देशभक्ति प्रतीक को एक ठूलो संख्या संग नयाँ 10- र 50-प्रतिशत चाँदी नमूनाहरू थिए। सुरुमा, तिनीहरूले मा चित्रण सिक्का "पारा" स्वतन्त्रता भनिन्छ Phrygian टोपी क्रांति चित्रण गर्छ भनी पखेटा। उल्टो मा ब्लेड युद्धमा बन्चरो र जैतून शाखा प्रदर्शित भएको थियो। यी संकेत शान्ति सुरक्षा गर्ने इच्छुकता र इच्छा प्रतीक। नमूनाहरू 50 सेन्ट राष्ट्रिय झण्डा मा "पोको" थिए। अमेरिकी सेन्ट (सिक्का) 2010 देखि जस्ता, पीतल र निकल मिश्र धातु उत्पादन गर्न थाले।
अमेरिकी बैंक नोटहरू बढेको ब्याज Commemorative सिक्का एक श्रृंखला minting प्रभावित। श्रृंखला मुद्रा समर्पित अब्राहम लिंकन गर्न। यसलाई4नमूनाहरू समावेश छ। प्रत्येक उल्टो मा अब्राहामको जीवनको महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रदर्शित। को अग्र 16 औं अमेरिकी राष्ट्रपति प्रोफाइल विशेषताहरु। 2009 मा उत्पादन Jubilee श्रृंखला जस्ता बनेको र तामा संग लेपित थियो। पछाडि छ जो नमूनाको डिजाइन, चित्रण गरिएको लिंकन मेमोरियल।
निकल को अद्वितीय नमूनाहरू, nickels, 2004 मा देखियो। को अग्र पक्ष थोमस जेफरसन को एक पोर्ट्रेट मा। सबै अमेरिकी सिक्का पश्चिम को विकास को चरणमा देखाउन अद्वितीय चित्रहरु छन्:
पदक "पश्चिम विकास गर्न भ्रमण को सहभागीहरूलाई सम्मानित छ जो विश्व '', को अधिग्रहण।
भएको डुङ्गा लुईस र Vilyam Klark अमेरिका को क्षेत्रहरूमा मार्फत यात्रा।
प्रोफाइल चराई भैंसिहरु - जनावर अमेरिका को मानिसहरूले धेरै संस्कृतिका ठूलो महत्त्व छ।
प्रशान्त महासागर को तट को दृश्य।
तर सबै संग्रहकर्ता को सबै भन्दा 25 सेन्ट (चौथाई) को सिक्का मा रुचि। को वार्षिकोत्सव को पहिलो नमूना 1976 मा जारी भएको थियो। को अग्र मा जर्ज वाशिंगटन को छवि छ। विजय को टर्च संग ढोल बजाउने व्यक्ति, 13 ताराहरू (देश मा पहिलो अमेरिका को संख्या) द्वारा घेरिएको - उल्टो मा।
कुनै कम चासो रिलीज 10 वर्ष बढाइएको छ थियो जो सिक्का "50 राज्य" छ। यो अवधिमा, यो प्रति वर्ष5नमूनाहरू मा जारी भएको थियो। यो तामा सिक्का निकल मिश्र धातु संग। मापदण्डहरु: व्यास - 24.3 मिमि; वजन - 5.67 जी, मोटाइ - 1.75 मिमी। Commemorative चौथाई पूर्णतया मानक पालना।
पहिलो अमेरिकी सिक्का को XVII सताब्दी मा परिसंचरण थिए। तिनीहरूले चाँदी र सुन बनेको थियो। डिजाइन को एक आवश्यक तत्व रूपमा लामो देश को एक प्रतीक advocated छ - स्वतन्त्रता। उनको तस्बिरहरू समय को प्रसिद्ध र सुन्दर महिला देखि बन्द लेखिएका थिए। प्रत्येक मुद्दा को डिजाइन परिवर्तन भयो। आधुनिक वर्षौंदेखि शासन, अमेरिका राष्ट्रपति चित्रहरूले नमूनाहरू को अग्र। उल्टो मा - शान्ति को प्रतीक, रक्षा गर्न राज्य शक्ति र तत्परता।
टर्की पैसा के हुन्
लाटविया मुद्रा हिजो र आज
मिस्री: पर्यटकहरुका लागि जोडी सुझावहरू
पैसा। पैसा र आफ्नो उद्देश्य को प्रकार
चिनियाँ युआन - CNY। मुद्रा कस्तो?
विकल्पहरू सार्न: कम्पनी सार्दा लाभ के हुन्?
ब्रोंकाइटिसको लागि कुन साँघुरो प्रभावकारी हुन्छ
Fortuna5* (टर्की) - फोटो, मूल्य र पर्यटक रूस देखि समीक्षा
क्यूबिक zirconia पत्थर-बोतल-बच्चा को गुण
प्रसिद्ध अभिनेता Sylvester Stallone: जीवनी
एक बार लागि ईटा स्तम्भहरु के गर्छ?
नवजात शिशुहरु मा Hiccups, के गर्ने? नवजात शिशुहरु मा hiccups कसरी रोक्न? किन नवजात अक्सर hiccups?